Mushaharka Uu Qaadanayo Raphael Varane Hadii Uu Ku Biiro Manchester United Oo La Ogaaday
HomeHoryaalka IngiriiskaMushaharka uu Qaadanayo Raphael Varane Hadii uu ku biiro Manchester United oo la ogaaday
July 18, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Raphael Varane ayaa lagu soo waramayaa inuu mushaar ahaan u qaadan doono 10.3 milyan ginni sanadkii ilaa iyo June 2026 haddii uu ku biiro Manchester United oo ka socota Real Madrid inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Xiddiga reer France qandaraaska uu haatan kula joogo Bernabeu ayaa dhacaya bisha June ee soo socota, Man United ayaana lagu xamanayaa inay u aqoonsatay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ka hor ololaha 2021-22.
Kooxda heysata 20ka jeer hanashada horyaalka Ingariiska ayaa la rumeysan yahay inay durbaba heshiis shan sano ah la gaareen daafaca dhexe waxaana ay haatan dalab rasmi ah u gudbin doonaan Los Blancos.
Sida laga soo xigtay Sport , ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa mushahar ahaan u qaadan doona 10.3 milyan ginni sanadkii Old Trafford, taasoo ‘aad uga badan’ waxa ay Real Madrid diyaar u tahay inay u soo bandhigto si uu u cusbooneysiiyo qandaraaskiisa caasimada Spain.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Varane uu ka niyad jabay xaddiga mushaarka cusub ee David Alaba ee kooxda isla markaana uu haatan u diyaar garoobay ‘isbeddel cusub.
28 jirkaan – oo sidoo kale lala xiriirinayay Chelsea iyo Paris Saint-Germain toddobaadyadii la soo dhaafay – ayaa 360 kulan u saftay Los Blancos 10kii sano ee ugu dambeysay.